Madaxwayne Farmaajo oo Kormeeray XARUNTA Tirakoobka Ciidamada Iyo Wuxuu la yaabay Markii hore ! [Sawirro] | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Madaxwayne Farmaajo oo Kormeeray XARUNTA Tirakoobka Ciidamada Iyo Wuxuu la yaabay Markii hore ! [Sawirro]
Feb 12, 2020 - 26 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa kormeeray Xarunta Tirakoobka Ciidanka Qalabka Sida oo lagu soo gabo-gabeeyey howlihii la xiriiray ururinta xogta iyo diyaarinta diiwaanka Ciidanka.
Dhuusa weeyne yaa Barry ciidan
Iyo hawlihiisa dhoocilada
Ayuu kufsan jiraye igu sawir
le waaye sheekadu
Canugaan abgaal e daankisa
Ad moodid qaraf cidi ka guurtey
Isagu waa camiil lagu shaqeeysto
Ki kheeyre e dhakadisa aad moodo
Canug aan dhameeys ku dhalan
O Colin ah isna waa ah taaganyahey
Sidi nin ciidan iyo hawlihiisa
Wax ka yaqaan kkkk
Alla maxa ummada been lala
Waa uun sida Odey Axmed Somaali
O Dadkaa kalshaale la hor taagan
nigu Pilot ayan ahaan jirey
Waligina dameer xita må kaxeeyn
O ceeyrti kacaanka ayuu iska cuni jirey
Wiil HIRAAB, adeer waa mahad ALLE SWT haddaad caafimaaday ood ka soo baxday cisbitaalki dadka sida kale noqda ANNAGUA ducaan kugu kabayna. WBT
Farmaajo iyo.kheyre wadanka iyagaa xukuma. Wiil hawiye iyo wiil darood mashaaalaah wadanka. Cadawga kailaasha. Darod ka xanaqasan iyo hawiyaha xanaqasan ha u joojin ina. Guul .guul wadanka shaqa ka qabta guul cadawga hajabo mucarad ashaab maamulgobeleed kibray qabyalad ku dhisan guul
Waddani KACAANBOY21, adeer MAXAAD ku fali gunta Hawiye iyo Daarood ADOO helikara Somali nooc kastay tahay?. WBT
Maxaa la ooyeysaa sxb?
Eebow 3 nin oo shaqadii HAG wado waaye (Farmaajo, Kheyre iyo Odawaa)
Hadey Qaldaana waa la Tuura wareega dambe
Wiil Hiraab kan la baxay Hawiye xitaa ma aha. Lahjaddiisa iyo dooddiisa labaduba kama turjumayaan aragtida reerkaa uu magaca ka dilayo… Yaa igu raacsan?..
Sidoo kale kan Sargaalka wata oo isna Absame iska dhiga, u dhabba gala! Waxay ila tahay in uu qolo kale yahay…
Wiil Hiraab magacdaan is Dhig
Laguma Caayo Madaxdada iyo Dadka kaleba
Ee Saciid Dhuudoweyne iyo Axmed Dhuxuleeste Magacyadooda Soo Qaado
Ninkaan waa halyeey wallee qabiil darti kuuma mucaarado
ilaa Waagii uu Rasalwasaaraha ahaa oo KALPALA looga furfuriwaaye FAROOLE IYO MELES, Halyey ayuu u ahaa Hawiyaha
15 wiil ayaa u dhimatey mudaharaadkii loogu sameeyey Xamar.
– Hadana waa Hogaamuye Hawiye, oo la garabtaagan – Dhul, Dheef iyo Dhalaan.
WAR MA JABHAD BAA?.
TAASI WAXAY KU TUSAYSAA MAAMUL XUMADA KA JIRTA MEESHA.
SOMALIYA ILLAAHAY HA U SAHLO.
Hawiyaha hadii wax wadanyaan sawkuwii wadanka qabsaday may ahayn?
20 sano kadib in halkan niic lala soo fadhyo sow nacasnimo maaha/
Hawiye walaa Daarood ama cid kale,qabiinimo waxba lagu wadi karimaayo.
Saa intaba waad soo aragteen.
Meel iska fadhiista oo xaarka iska maydha.
If you are confused about KUDARSO AMA KADARSO.
Waxey katimid reer araar reer Guuro, oo ah
Ama Geelka xooluhu ka cabaan nala qodo, ama sida Dadka Socotadaa Biyo kadarso.
British also says
take action what you are talkin about or stop talking about it.
* Ka muuqo ama Ka maqnow ( Uunsi iyo Alalaas ma rabnee)
= araah reer Guura
Farmaajo iyo khaire haday isla dhamaystaan mandate kooda xileed si khilaaf la aan ah record ayay dhigeen waana in farmaajo
Lagudoonsiiyaa bilad sharaf. Waxaana kudayan Fiona madaxda kadanbayn doonta
Maleeshiyadan ku magacaaban ciidanka qaranka oo la ogaadey inay Alshabaab u yihiin “Hilib bannaan yaal oo haad arkay” haddii ay muqdisho meel ka baxsan tagaan.Sidaa waxaa qoray joornalkan oo soo xiganaya Pentagon .
Gaalo ayaa sheegtay NAFTIISA QARXIYE, waa ka adagyahey askari Bilaash ku shaqeeyo.
Xaange gaalada ayaa laga hayaa Nin Naftiis halaage ah, lama yaqaan qaab loo difaaco
Anna waxaan ku darilahaa,
Nin Ku farxaayo Gaalo ayaa dadleyga Liidey, sidee loola doodikaraa.
– Naftiisa halaage vs Dalkiisa Liide
Ciidan dhab ah oo carbisx fiican iyo khibrad dagaal leh ayaanay ahayn.
Teeda kale haddii hadafa aad askariga u noqotay uu yahay mushaar qaado oo kaliya.Shabaab kama adkaan karaysid.
Waa in ninka askarigaa physically and psychically loo dhisaa.Aaminaa inuu u dhimanayo dalkiisa iyo dadkiisa.Oo uu helaa dammaanad buuxda haddii uu dhinto iyo haddii uu dhaawacmaba inuu leeyahay dad iyo dowlad ka damqanaysa.
Waa in culimada tima weynta ama ahlu sunna ay tashkiiliyaan ciidamada askartana qaab diimaysan looga dhaadhiciyaa inay shabaab yihiin khawaarij gaalo ah ayna tahay in lagu shahiido
ASC dhamaantiin markale,
Xaange waad mahadsantahay saaxiib warbixinta.
Of course, askari ciyaala suuq ah, oo physically iyo mentally baaaba’ u ah, oo jaad cunna, oo aan daryeel heeysan iska dhicin karro cidna iska dhaaf argagixisda alshbaab.
Laakiin, kuwa odayaasha daanyeerada ah sida Ahmed Somali oo saraakiil been ah, oo Afweeyne markii horeba uga dhigay si musuq maasuq ayaa laleeyahay waa taliyayaal, kuwaas ma waxweey dad waxbarraan, waa jaahiliin, hadanna da’a ah, oo duqoobay, waana cudurka Somaliya heeysta xaga ciidanka.
Xataa dad u abaabulan si qabiil ah ayaa walaahi iska dhicin karra argagixixada alsbhaab.
Kaliya Somalida ayaa daaneyero ah, oo afkooda masoo marrin karraan xaqa iyo waxa saxda ah. Sababtoo ah, waa fulayaal.
Meesha ayeeyba lasoo taaganyahiin qaarkooda caqliga xun, alshbaab waxaa ku jirra qabiil walba. Tan oo ah, figrad eey suuqa galiyeen isla argagixisda si aanan loo arkin.
Maya, argagixisa alshbaab maahan Somali oo dhan. Qabiilo gooni ah waaye, dagaalii qabiilka oo Somaliya ka dhacay oo kale kaliya ayaa looga adkaan karraa, iyo iyada oo la helo ciidan aqlaaf iyo Sharaf leh, oo dayreel leh, oo qabiilada Somaliya oo dhan inta laga soo aruuriyo, layiraahda qabiil walba deegaanka uu Dagan yahay 3 bilood Ayaan uga saareeyaan argagixisda, kabacdi qabiiladaas isku tagay ee ciidanka dowladda ah, oo marba gobol iyo qabiilada eey gumaadaan ka dul kiciya argagixisda alshbaab.
Inta ka horeeysa, daanyeerta, weey is ogyahiin daanyeerta la dhaco, la baado, la kufsado, oo afmaaymaayga la barray sidaas ayaa loo duleeyn. Daanyeero.
FRICAWARSomali troops still vulnerable to al-Shabaab outside Mogadishu, Pentagon saysNew report calls into question AFRICOM’s ability to ‘degrade’ al-Shabaab by 2021
Despite some successes, the Somali National Army – backed by African Union and U.S. forces – have made little progress in recent months on Operation Badbaado, a joint effort to secure rural areas south of the capital, according to a Pentagon Office of the Inspector General reportpresented to Congress on Tuesday, February 11.
Horta jaale Madxwayne Maxamed Cabdullahi(Awbadkhaleha 3-aad) aadbuu u mahadsan yahay.Tani waxay muujinaysaa in talaabo kale hore loo qaadayo.Hadiiba maanta laga gugbay wixii kale oo dhan oo loo gudbay in askari kasta la helo dadaalkiisa iyo wax qabadkiisa oo diiwaan gashan si uu u dalaco ama u helo wax barsho dhan walba le.
Well done Jaale madaxwayne.
Xasan sheekh wuxuu ku odhan jiray ciidanka.Dee hadii aydaan sidaa raali ku ahayn iska taga oo taga guryihiina kkk
Aanaa daawdaay oo la i waydiiyaa arintaasi.Maalintaasi waan naxay.Waxay ahaayeen Odayaal isaga aad uga da’waynaa oo gaajayasan.Hagaamintu maaha wax lasyka helo.Waa wax kale oo aan u baahnayn inaad reer Hebel noqoto.
Taasi halkaasi aan ku dhaafo.
Land of Punt ayaa su’aal dadka waydiiyay.
Inkasta oo uu u qalmo in la caayo,hadana waan iska dhaafay caydiisa – waxaan is-idhi,bilee uu halkaaba ka taagan yahay aqoonta dawladnimo iyo wada jirka ummadeed.
Axmed Madoobe iyo alshabaab wax u dhexeeyaa ma jiro – hadiiba aanu ka xumayn.waxaan qabaa inuu ka xun yahay alshabaab.Waa dabadhilif u adeegaya wadamo shisheeye.waa Ex-alshabaab iyo Mooryaan hore.Isaga iyo alshabaab wwa isku mid ama waxaaba la qaatay alshabaab.Alshabab wuxu dheerayhaya qabiil kicinta iyo u adeege wadamo shisheeye.
Markaasi waa in isaga lagu qaadaa dagaalka si meesha looga xoreeyo,isaga iyo Maleeshiyada uu ka soo urursaday Dhagaxbuur iyo qabri dahare.
Unityga wadanka waxaa lagu ilaalinkaraa wada jirka.Ninkasta oo ka horyimaada wada jira waa in meel la saaraa.
Ciidanka la geeyo Gedo iyo Baled-xaawo waa sax.Meel kasta oo wadanka ka mid ah ciidanku way tagi karaan.Hadaad diiido,waxaa soo socta maalin aad yeelidoono adiga oo bahdilan.
Gabre ayay dumrka u gayn jireen kuwan sheegta maamul goboleeyadu.Waa wasakh Somaliya ceeyeebyay.Waa in laga sifeeyaa Inangumeed oo dhan.
Dhamaadkii wakhtigii Inangumeedka oo gabo gabo ah.iyo dadkiisii oo ooyaya.
Gu’gii guusha somaliyeed oo curtay.
Sawir qurux badan. Shaqo muhiim ah oo loo baahan.
Waan hubaa nabad iyo nolol. Wax yaabaha yar yar ee ay mustaqbalka miiska keensan doonto ayey ka mid noqon doontaa diwaan gelinta ciidanka banaadir state.
Ciidanka la habeeyo sifiican loo diwaan geliyo. Mushaarka oo ciidanka oo la kordhiyo. Waa wax muhiim ah loo baahan yahay.
1 sano ayaa haray wadooyinkii waa xiran yihiin. Afgooye iyo xamar lama tegi karo.
Dastuurkii inangumeedka laga minguuriyay waxba lagama qaban.
Majiro maamul gobaleed dowladda heshiis la ah oo shaqo ka socoto. Kuwa kasoo horjeedo waa laysku hor fadhiyaa.
Shaki badan ayaa jira. Madaxweynihii wuxuu ku dhex milmay itoobiya.
Abiya axmed. Ayaa laga hayaa somaliya iyo itoobiya Hal wadan ayey noqonayaan.
Hadda askari itoobiyaan ah oo is mid ciidamada beled xaawo joogo waxaa laga sheegay in uu dhahay. Annaga iyo ciidanka somaliya isku mid ayaan nahay Hal dal ayaan u wada sheqeynaa waana itoobiya.
Hadda waqtigu waa gabo gabo. In lasoo laabto waa la rabaa. Waa ku qasban yihiin in ay xoogaa dhaqdhaqaaq sameyaan si.ay mar kale wax magaratada indhaha uga xadaan.
Waan hubaa in albaabka laga bixi doono Mr farmaajo. Waaba haduu kala keeno.
Adaa mudan bro.
Aad iyo aad xitaa qaab qabiil ha loo abaabulo oo deegaanada ay joogaan qabaailada dega ha lagu kiciyo.
Waa inuu jiraa hadaf iyo siyaasad cad oo uu leeyahay askariga ka hor tagaya nin aaminsan haddii uu dhinto inuu jannada galayo oo uu shahiid yahay.
Laakiin nin mushaar kaliya hadafkiisu yahay marnaba kama adkaan karo shabaab.
ruun ahaanti hadanaan la xaqireenFarmaajo iyo Kheyre sayisada Somaliya wax badan bey ka badelen waxaad mooda dadka in ay fahmeen Qarinimada in ay tahay muqataas balse Qabiilku in uu yahay cudur Somalina ka rabey aduunka waqti waa in la siiyo labadan nin Inshalaah wadankii wuxuu noqon mid aduunku uu soo dalxiis taago.
Somali waxey wax ku qabsan kartaa wada jir balse maha aha reer hebel ba degen halkaan waxaas wax aduunku ka soo gudubey 1000 sano waad argtey qurbaaan wada joogna meshaad rabto ayaad digi dadku waa suman yihiin.Waxaan waxa noo keney jahamadii laga soo dhisey Itobiya oo ku dhisana qaabil si Somaliya lagu dumiyo 30 years waqti dheer waa in lafahamo hada in anaan lagu dhisi kariin qaabil wadan.